Ukukhulisa umntwana nge-Autism-Khetha eyona Tracker ilungileyo yomntwana wakho | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Ukukhulisa umntwana nge-Autism-Khetha eyona Tracker ilungileyo yomntwana wakho
Ngaba unomntwana onengxaki yokuphazamiseka emzimbeni (Autism Spectrum Disorder (ASD)? Emva koko kufuneka wazi ukuba kukho umngcipheko omkhulu wokuba umntwana onjalo angazama ukuzula-zula kude ngaphandle kwemvume. Kumzali onomntwana one-ASD, i-tracker ye-GPS ayisiyonto intle kodwa iyimfuneko. Kukho inani elikhulu lemveliso ebhengezwe mihla le ekhusela aba bantwana ekuzuleni bodwa. Siza kuvavanya ezinye zezona zidume kakhulu phaya ukunceda ukunceda iintsapho zikhethe kwaye zikhethe kakuhle.
I-GPS014D (iGreater GPS yomkhangeli wabakhulileyo be dementia nabantu abadala)
Ngexabiso elimalunga ne- $ 238 kwaye akukho phakheji lokubhalwayo lwenyanga nokuba yeyiphi, yindawo yokukhangela yabalupheleyo nabantwana. Unxibe njengayo nayiphi na enye into eqhelekileyo emqaleni. Ine-tracker ye-GPS engaphakathi kwiindlela ezilandelela intshukumo yabantwana abaneemfuno ezizodwa, inekhamera ethumela imiyalezo ye-SOS ecaleni kwemifanekiso ngale ndlela awufumani kuphela isilumkiso kodwa uyayibona nento eyenzekileyo. Yisixhobo esibonisa uhlobo lwe-2, esithetha ukuba imiyalezo ayinakufumaneka kuyo kodwa inokuthunyelwa kuyo. Kwipendant kukho:
inombolo yefowuni 1
inombolo yefowuni 2
ikhadi le-sim slot
Isalathiso somqondiso weGPS
I-GPS pendant ine tracker ebethelelwe evumela ukujonga indawo kunye nentshukumo, kukho inketho yexesha lokulandela umkhondo ebonisa ngokuqhekeza (indawo ye-pendant) kwaye ijikeleze. Kukho ilog yokujonga indawo onokuthi ujonge kuzo zonke iindawo ezazityelelwe. Iza kunye newotshi yokuthetha enceda lowo unxibileyo ukuba alazi ixesha, oku kunokuba luncedo. Kukho ukhetho locingo lwe-GEO ekuvumela ukuba umakishe indawo njengomda, oku kuthintela lowo ulukayo ukuba angaweli ngqo umda. Kukho i-alarm ye-SOS enokuthi ibangelwe ukuba kunokwenzeka ingozi. Kukho isikhumbuzo sebhetri esisezantsi esiya kukunceda uqaphele isidingo sokubiza ifowuni ingakumbi xa ibhetri iphantsi. Uya kukhunjuzwa ukuba iyitshintshe nini kwakhona ikhadi le-sim, oku kuyanceda ukugcina isebenza kakuhle. Ikhamera inokuthatha iifoto kwaye le yenye yeendlela ezilungileyo zokubeka esweni iimfuno zabantwana kuba unokubabona bekude kude nexesha. Kukho iqhosha elinokuthi licinezelwe ukuba libize nokuba leliphi kula manani mabini abhalisiweyo, lenza ukuba bakwazi ukufikelela kulo xa kufuneka njalo. Xa kukho umnxeba ongenayo, ipendant iyangcangcazela kwaye oko kwenza ukuba lowo ufowunayo azi ukuba umnxeba uyeza.
Ubungakanani bayo yi-45 * 50 * 15.5mm (L * B * H) kwaye inobunzima ngeenxa zonke kwi-33graphs, i-2G GSM frequency band yayo; I-850 / 900 / 1800 / 1900Mhz kunye ne-3G band ye-850 / 1900Mhz yokhetho lwe-1 kunye ne-900 / 2100Mhz yokhetho lwe-2. Inayo i-GPRS yeklasi ye-12 TCP / IP. IneGPS efumana ixesha le60 / 29 / 5 yokubandayo, eshushu nokushushu ngokulandelanayo. Inesimo sokumiswa kweGPS ngokuchanekileyo ukuya kwi-10 ukuya kwi-15mm, ikwanayo i-WIFI yokuchaneka kwe-15-100 (ngaphakathi kwe-wifi yi). Ubushushu bayo bokusebenza yi -18'C ~ + 45'C kwaye umthamo wayo webhetri yi500mAh.
I-GPS033W (i-GPS abantwana be-smartwatch ngefowuni yevidiyo)
Ukubeka iliso kwimfuno zakho ezikhethekileyo zomntwana akuzange kube lula oku, kunye ne-GPS abantwana smartwatch kunye nokusebenza kwayo okuninzi unokwenza kakhulu kwaye uhlale ubukele ngokwaneleyo kumntwana wakho ngelixa usenza ezinye izinto. I-smartwatch yenza phantse yonke into eyenziwe ngophawu oluqhelekileyo. Inomboniso omkhulu weesentimitha ze-1.4 kwaye ikwindawo enamanzi, ngenxa yoko akukho nto unokukhathazeka ngayo kuba yi-IP67 engangeni manzi kunye nothuli olungena manzi. Ezinye zeempawu zayo zezi:
Iindlela ezimbini zokufowuna
I-alamu yamandla aphantsi
Ubomi bebhetri ende
I-smartwatch ine-GPS kunye ne-AGPS eyomeleleyo kwakhona. Ine-LBS kunye nendawo ye-Wi-Fi kuyo inokusebenza. Iselfowuni okanye ikhompyutha inokusetyenziswa ukulawula okanye ukubeka iliso kwisixhobo. Kukho indawo yexesha le-GPRS yokwenyani ekwavumela ukulandelela kunye nokubeka esweni. Ivumela iifowuni zendlela ezimbini zithetha ukuba ungabatsalela umnxeba kwaye banokufumana iifowuni zabo. Iimpawu zeBluetooth kunye neWi-Fi ziyafumaneka, inekhamera enokusetyenziswa ukuthatha imifanekiso kwaye isetyenziselwe ukubizwa kwevidiyo. Unokujonga i-albhamu kuyo, mhlawumbi uthumele imifanekiso yosapho kubo, banokuyihlola ngokuhamba kwexesha. Kukho incwadi yefowuni eyabiza indlu ngawo onke amanani ofuna ukuba babe nakho ukufikelela kuwo. Kukho indawo yokhuseleko onokuyisebenzisa ukuthintela intshukumo yabo kwaye ubathintele ukuba bangaweli umda. Inezaziso zebhetri ezisezantsi ezikhumbuza ukuba ibhetri isebenza kancinci. Ukuvala kude nako kunokwenzeka oku kuthetha ukuba unokuyicima kude.
Ubungakanani bayo yi-232 * 42 * 17mm (L * B * H) kunye nomboniso we-IPS kunye nomtya wokubukela i-silicon, ibhendi yayo yexesha le-2G GSM; I-850 / 900 / 1800 / 1900Mhz, i-3G band B1 B2 B5 B8 kunye ne-4G band ye-FDD-LTE B1 B3 B5 B7 B8 kunye ne-BNUMX ye-B38 ye-B39 ye-40 ye-41. Inayo i-GPRS yeklasi ye-12 TCP / IP. IneGPS efumana ixesha le60 / 29 / 5 yokubandayo, eshushu nokushushu ngokulandelanayo. Inesimo sokumiswa kweGPS ngokuchanekileyo ukuya kwi-5 ukuya kwi-10m, ikwanayo i-WIFI yokuchaneka kwe-30-50 (ngaphakathi kwe-wifi yi). Ubushushu bayo bokusebenza yi -18'C ~ + 45'C kwaye umthamo wayo webhetri yi650mAh. Kukwakhona nenqaku le-dock eshaja inqaku lesinyithi, ikwakhona nesithethi esikwinqanaba eliphezulu esinombhobho. Ixesha lokuthetha lixesha leeyure ze-4 kunye nokuma ngeentsuku ze1-3.
4968 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-9 Namhlanje